Thermomix ကဘာလဲ? | သာဓက
El Thermomix အစားအစာထုတ်လုပ်သူVorwerk မှဖန်တီးခဲ့သော VM 70 မော်ဒယ်လ်ကို ၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကတီထွင်ခဲ့သည်။ ထိုစက်ရုပ်သည်ယခင်နှစ်များကဖန်တီးခဲ့သောအခြားစက်ကိရိယာများကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ အမျိုးမျိုးသောမော်ဒယ်များမှတဆင့်သွား ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိသောဗားရှင်းသို့ရောက်သည်အထိ။ တိတိကျကျ VM2200 သည်အပူနှင့်အအေးနှစ်မျိုးလုံးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်သောစွမ်းရည်သည်စပိန်သို့ပထမဆုံးရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။
TM စီးရီးတွင်ပထမဆုံးမော်ဒယ်မှာ ၃၃၀၀ ဖြစ်ပြီး ၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ဤပစ္စည်းသည်တောင်းကိုကျေးဇူးတင်စရာမလိုပဲချက်ပြုတ်နိုင်သည်။ နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် TM-3300 ဖြင့်ချိန်ညှိထားသောချိန်ညှိမှုနှင့် Varoma ကဲ့သို့သောဆက်စပ်ပစ္စည်းအသစ်များကိုထည့်သွင်းကာရေနွေးငွေ့ချက်ပြုတ်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ နောက်ဆုံးအားဖြင့် 2004 ခုနှစ်တွင် TM31 မွေးဖွားခဲ့သည်တစ် ဦး ရသဗေဒအသစ်ပြန်လည်ဗားရှင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအဖုံးများနှင့်ဓါးသွား၏ဒီဇိုင်းအသစ်သို့မဟုတ်လက်ဝဲအလှည့်အဖြစ်အချို့သောအသစ်အဆန်းတွေနဲ့။ ဤပုံစံဖြင့် TM31 နှင့် Thermorecetas.com မှချက်ပြုတ်နည်းများကိုပြင်ဆင်ထားသည်
လုပ်ဆောင်ချက် ၁၂ ခု
ခုတ်နှင့်ခုတ်။ ၎င်းသည်ပျော့ပျောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ မာကျောသည်ဖြစ်စေ၊ ပမာဏအမြောက်အများရှိအစာအမျိုးမျိုးကိုခုတ်ဖြတ်နိုင်သည့်အတွက်၎င်းသည်အများဆုံးအသုံးပြုသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကြိတ်ခွဲ။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြမ်းတမ်းသော texture ရှိသည့် puree မှတရုတ်ကိုဖြတ်ကျော်ရန်မလိုအပ်သောအလွန်ကောင်းသောခရင်မ်အထိရရှိနိုင်သည်။
ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်ပါ။ စက်၏စွမ်းအားနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ဓါးသွားများကြောင့်သကြား၊ ပေါင်၊ ကော်ဖီ၊ အခွံမာ၊ ပဲသီးနှံ၊ ချောကလက်၊ နံ့သာများ၊ မွှေးကြိုင်သောအစေ့များစသည်တို့ကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းအမှုန့်အဖြစ်လျှော့ချလိမ့်မည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမိမိကိုယ်ပိုင်ရာသီသို့မဟုတ်ဂျုံမှုန့်များ (သို့) တိုက်ခိုက်သူများပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ အစားအစာသည်းမခံခြင်းသို့မဟုတ်ဓာတ်မတည့်ခြင်းများခံစားရသောသူများအတွက်အထူးစုဆောင်းထားသောအစားအစာများဖြစ်သောကြောင့်မည်သည့်အရာသည်များစွာစုဆောင်းနိုင်သည်။
တာဘို။ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအလွန်ခဲယဉ်းသောပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်သောဝက်ပေါင်ခြောက်အကြံဥာဏ်များ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုဒိန်ခဲများသို့မဟုတ်ရေခဲများကိုခုတ်ယူလျှင်၎င်းသည်သင့်လျော်သောလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။
သကြား 30 စက္ကန့် 10
အသားစိမ်း 10 စက္ကန့် တိုးတက်သောမြန်နှုန်း5- 10
ကြက်သွန်နီ4စက္ကန့် 5
ခြော့ကလကျ 12 စက္ကန့် 8
ဂျုံ (ဆန်၊ ပဲ၊ ဆန်၊ ပဲပုပ်များမှ) 1 မိနစ် တိုးတက်သောမြန်နှုန်း5- 10
ရေခဲ 10 စက္ကန့် 5
ကျင်ခွက် 10 စက္ကန့် တိုးတက်သောမြန်နှုန်း5- 10
ကဗျာ2စက္ကန့် 4
Parsley5စက္ကန့် 7
ငရုတ်ကောင်းသို့မဟုတ်မုန်လာဥ3စက္ကန့် 5
ဒိန်ခဲ (Emmental အမျိုးအစား)5စက္ကန့် 5
ဒိန်ခဲ (Parmesan အမျိုးအစား) 10 စက္ကန့် တိုးတက်သောမြန်နှုန်း5- 10
Serrano ဝက်ပေါင်ခြောက် tacos တံခါးပိတ်ခွက်နှင့်5turbo လေဖြတ်
လှုပ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြီးပြည့်စုံသော texture နှင့် finish ကိုရရှိရန်ကွဲပြားခြားနားသောပါဝင်ပစ္စည်းများရောနှောနိုင်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းသော Omelette (သို့) အရသာကင်မရာများနှင့်ကိတ်မုန့်များအတွက်ကြက်ဥများကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်သင်သည်အရည်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုရောနှော။ ကြွယ်ဝသောဖျော်ရည်များ၊ ကော့တေးများသို့မဟုတ်ဟင်းချိုများကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုအသုံးပြုပါကအကောင်းဆုံးသောရလဒ်များကိုရရှိရန်အစိုင်အခဲပါဝင်သောအရာများကို ဦး စွာခုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကြိတ်ခြင်းကိုအကောင်းဆုံးပြုလုပ်ပါ။ ထိုအခါသင်သည်အရည်ပါဝင်ပစ္စည်းများထည့်သွင်းခြင်းနှင့်စာရွက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချိန်နှင့်အမြန်နှုန်းကိုရိုက်နှက်ရုံသာဖြစ်သည်။
emulsify ။ ၎င်းသည်ရိုးရာနည်းလမ်းဖြင့်လုပ်ဆောင်ရန်အခက်ခဲဆုံးအလုပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Thermomix ကိုအလွယ်တကူလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အရည်နှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်နိယာမအားဖြင့်ရောစပ်ခြင်းကဲ့သို့သောရေနံနှင့်ရှလကာရည်ကဲ့သို့သောဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စစ်မှန်သောစားဖိုမှူး၏ကျွမ်းကျင်မှုဖြင့်ဝက်အူချောင်းများ၊ ဗီနိုင်းဂရက်စ်သို့မဟုတ်မွတ်စလင်များကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
တောင်ပေါ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများထဲသို့လေကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကို creamy texture ရှိသည့်အခါပိုမိုအသုံး ၀ င်သောအခါအလွန်အသုံးဝင်သည်။ ကြက်ဥ၊ လူဖြူ၊ အနှစ်၊ နို့၊ မုန့်ဒိန်ခဲစသည်တို့ကိုတပ်ဆင်ထားမည်။
ထိုင်ခုံ။ Spike လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် Thermomix သည်ပေါင်မုန့်၊ ပီဇာ၊ ဘီစကွတ်၊ ကိတ်မုန့်၊ ကွတ်ကီး၊ ကွတ်ကီး၊ ၎င်း၏လည်ပတ်မှုကြားကာလအားဖြင့်၎င်းသည်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုတစ်သားတည်းဖြစ်အောင်ရောစပ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပဲ့ထည့်သည်။
ဖန်ခွက်ထဲမှာကွတ်။ ဖန်ခွက်၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ ချက်ပြုတ်နိုင်သောအပူချိန်ရှစ်ချက်နှင့်အမြန်နှုန်း ၁၁ ခုတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဂန္ထဝင်ဆုံးနှင့်ရိုးရာအစဉ်အလာများမှအလျင်မြန်ဆုံးပန်းတိုင်သို့အောင်နိုင်စေသည်။ သင်စာရွက်ကိုသာရွေးချယ်ပြီးအချိန်၊ အပူချိန်နှင့်အမြန်နှုန်းကိုသတ်မှတ်ပါ။ ကြွင်းသောအရာများကို Thermomix မှစောင့်ရှောက်ပြီးဖြစ်သည်။ သင်၏နည်းပညာကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဟင်းလျာများသည်ပြီးပြည့်စုံသောအပူချိန်နှင့်လှုပ်ရှားမှုကိုအမြဲရရှိသည်။ အခြားအသုံးအဆောင်များကိုဆေးကြောရန်မလိုဘဲနှင့်မည်သည့်အားထုတ်မှုမှမပါဘဲအရေခွံ၊ စွပ်ပြုတ်၊ ပဲ၊ ဆန်၊ ပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူကကျွန်တော်တို့ကို acoustic signal နဲ့သတိပေးလိုက်တယ်။ ဤနည်းဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဘွားများကသူတို့၏သစ်သားဇွန်းနှင့်ပြုသကဲ့သို့ဂရုစိုက်ရန်ဇွန်းမြန်နှုန်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်လက်တွေ့ကျသည်။
တောင်းထဲမှာချက်ပြုတ်ပါ။ ဒီဆက်စပ်ပစ္စည်းကဆန်၊ မုန့်စိမ်း၊ ပန်းဂေါ်ဖီစသည့်စသည်တို့ကိုမိမိတို့မူလပုံပန်းသဏ္ဌာန်၌ထိန်းသိမ်းလိုသောအရာများကိုချက်ပြုတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ငါး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ဥစသည့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသတ္တဝါဖြစ်သည်။ အရိုးကဲ့သို့သောခက်ခဲသည့်ပါဝင်ပစ္စည်းများအားဓါးသွားပိတ်ဆို့ခြင်းကိုတားဆီးပေးသည်။ တောင်းကိုအဆင်ပြေသောနည်းဖြင့်ဖယ်ထုတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်လှံတံ၏ထစ်ကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်အနည်းငယ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းကို strainer အဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
Varoma ကွန်တိန်နာနှင့်အတူချက်ပြုတ်။ ဒီကွန်တိန်နာကကျွန်တော်တို့ကိုမတူတဲ့အစားအစာတွေကိုအမြင့်နှစ်နေရာနဲ့နေရာချပေးတယ် ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥပမာ၊ ခရုခွံသို့မဟုတ်ငါးနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်အပါအ ၀ င်ဖြစ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်အချို့ကိုပြင်ဆင်နိုင်သည်။
လိပ်ပြာ။ ချက်ပြုတ်နေစဉ်လူ ၄-၆ ယောက်အတွက်ဟင်းကဲ့သို့သောပမာဏများစွာကိုနှိုးဆွရန်အလွန်အသုံးဝင်သောဆက်စပ်ပစ္စည်း။ ၎င်းသည်လိမ်းဆေးများသို့မဟုတ်လူဖြူများရိုက်ခြင်းနှင့် emulsifying ပြုလုပ်ရန်အတွက်အဓိကဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
ခန္ဓာကိုယ်။ ၎င်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အစားအစာကိုကိုယ်တိုင်ဖယ်ရှားနိုင်ပြီးပါ ၀ င်သောအရာများကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ရပ်တန့်ထားခြင်းကြောင့်စက်ကိုလည်ပတ်နေသည့်ဓါးသွားများမရောက်ရှိစေဘဲစက်လည်ပတ်နေသည့်အခါ၎င်းကို အသုံးပြု၍ ရေခဲမုန့်သို့မဟုတ် slushies အမြောက်အများထုတ်လုပ်ရန်စက်ကိုကူညီနိုင်သည်။
Beaker ။ ၎င်းသည်တိုင်းတာမှုယူနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဖန်ခွက်ကိုဖုံးအုပ်ထားနိုင်ပြီးရေမွှားများမရှိခြင်းနှင့်ရေငွေ့၏လွတ်မြောက်မှုလျော့နည်းစေသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအိုးထဲသို့အလွန်ထိန်းချုပ်ထားသည့်ပုံစံဖြစ်သည့်ဆီယန်းကို mayonnaise ပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူစေသည်။
လက်ကျန်ငွေ ကျနော်တို့ဖန်ခွက်အတွင်း၌ကွဲပြားခြားနားသောပါဝင်ပစ္စည်းများအလေးချိန်နိုင်ပါတယ်။ သင်စက်သည်ချောချောမွေ့မွေ့မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရှိနေခြင်း၊ ကေဘယ်ကြိုးသည်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်မဖြစ်စေရန်နှင့်စကေးခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးလျှင်စက်ကိုမလှုပ်မရှားစေရန်ရွေ့။ မထားသင့်ပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများစွာကိုချိန်တွယ်ရန်လိုသည်ဆိုပါကအသစ်ထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်အလေးချိန်အသစ်တစ်ခုပြုလုပ်တိုင်းချိန်ခွင်လျှာခလုတ်ကိုနှိပ်ရမည်။
Thermomix နှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဤနေရာတွင်ကြည့်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားတင်ပြပါမည် ဗီဒီယိုအပြည့်အစုံ.
Thermomix သို့မဟုတ် MyCook?
မီးဖိုချောင်သုံးစက်ကိုရွေးချယ်သည့်အခါလူတိုင်းမေးသောမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည် ¿ငါဘယ်လိုမီးဖိုချောင်စက်ရုပ်ကိုဝယ်သလဲ?။ ယေဘုယျအားဖြင့်ရွေးစရာနှစ်ခုရှိသည်။ Thermomix သို့မဟုတ် MyCook ။ အကယ်၍ သင်သည်ပစ္စည်းတစ်ခုစီ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးအားလုံးကိုသိလိုလျှင်၊ သင်ဤအခန်းကိုဝင်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည် MyCook vs Thermomix.